Xuska maalinta ciidamada Xoogga oo la baajiyey iyo Farmaajo oo war ka so saaray | Xaysimo
Home War Xuska maalinta ciidamada Xoogga oo la baajiyey iyo Farmaajo oo war ka...
Xuska maalinta ciidamada Xoogga oo la baajiyey iyo Farmaajo oo war ka so saaray
Maanta oo ay tahay 12-ka bisha April ayaa ku beegan sanad guurada 60-aad ee aas-aaska ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoona la baajiyey munaasabadda xuska maalintaasi, sababo la xariira cudurka faafa ee Coronavirus.
Sanad weliba maanta oo kale ayey ciidamada Xoogga dalka xusi jireen sanad guurada aas-aaskooda, waxaana ka qeyb-geli jiray madaxda dowladda Soomaaliya.
Ciidamada Xoogga oo ka kooban ciidanka Dhulka, ciidanka Cirka iyo ciidanka Badda, ayaa waxaa lagu aas-aasan tiro kooban, maadaama waqtigaas ay ku asteesneyd xorriyaddii dalka.
Sababta ugu weyn ee loo qaban waayey xuska ciidanka Xoogga ayaa talisku wuxuu ku sheegay amarkii lagu joojiyey isu imaatinka bulshada, cabsi laga qabo faafida Corona.
Dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya oo war ka soo soo saaray sanad-guurada 60-aad ayaa hambalyo iyo boggaadin u diray ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay Saraakiisha Soomaaliyeed ee ruug-caddaaga ah ee ku sugan dugsiyada Tababarka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee gudaha dalka, si ay aqoontooda iyo khibraddooda u dhaxal siiyaan jiilasha soo kacaya.